Gabadh Muslim ah oo Baraatiik loo diiday oo la siiyay magdhow | gaani89
Gabadha lagu magacaabo Rayan Abdel Rahman ayaa hada ka hor waxay Baraatiik ka heshay salong ku taala magaalada Malmö balse maalintii ugu horeysay ee ay xaadirtay shaqada ayaa la soo cayriyay.
Isla markii ay irida ka gashay shaqada ayaa Rayan waxay sheegtay in milkiilaha meesha ay si xun u soo eektay ka dibna ay u sheegtay in aysan baraatiik siin karin maadaama ay xijaab xirantahay isla markaana macaamiishu aysan ka ladhacayn qaab la biskeeda. Rayan ayaa intaas ku dartay in ay milkiilu hadalkeeda kor ugu qayliysay.
Rayan oo niyad jabtay isla markaana aad u xanaaqday ayaa durbadiiba waxay dacwo u gudbisay Booliska iyo xeerka ilaaliyaha cunsuriyada (Diskrimineringsombudsmannen) balse labadii codsiba waa la diiday. Intaas ugama aysan harine waxay qabsatay qareen u dooda kaasoo arintii gaarsiiyay maxkamad.
Milkiilaha Salongka oo lagu magacaabo Viktoria Sjöberg ayaa sheegtay in aysan cunsuri ahayn balse ay samaysay wax ganacsigeeda dan u ah , arintuna aysan Muslim kaliya ahayn balse guud ahaan cidii timaha u daboolanyihiin oo dhan aysan goobteeda Baraatiik ama shaqo ka siin karin.
Si kastaba ha ahaatee qareenka Rayan ayaa dalbaday in la siiyo 150,000 kr oo magdhow ah. Lacagtaas ayaa ku badatay milkiilaha iyadoo markii dambe lacagta laga dhigay 27 500kr isla markaana Rayan ay codsatay in la siiyo raali galin. Milkiilaha ayaa bixisay raali galinta.
Arintaan ayaa la dhihi karaa waa guul u soo hoyatay haweenka Muslimiinta ah ee ku dhaqan Sweden. Waana arin muhiim ah in ay ku wacyi qaataan in haddii lagu cunsuriyeeyo aadan sheekada intaas uga harin balse maxkamad la gaarsiiyo.www.gaani89.wordperss.com
Soomaalida oo loo tababarayo jarida dhirka [Video] →